Gịnị Mere Anyị Ga-eji Na-ekpe Ekpere? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Gịnị mere anyị ga-eji na-ekpe ekpere?
Jehova Chineke chọrọ ka anyị na-akọrọ ya ihe ndị na-enye anyị nsogbu. Ọ chọrọ ka anyị na-eme otú ahụ mgbe niile. (Luk 18:1-7) Chineke na-ege anyị ntị n’ihi na ọ hụrụ anyị n’anya. Ọ̀ bụ na anyị ekwesịghị ịna-ekpegara Nna anyị nke bi n’eluigwe ekpere ebe ọ bụ na ọ gwara anyị ka anyị na-eme otú ahụ?—Gụọ Ndị Filipaị 4:6.
Ihe mere anyị ji ekpe ekpere abụghị naanị ka anyị rịọ Chineke ka o nyere anyị aka. Kama, ekpere na-enyere anyị aka ka anyị bịaruo Chineke nso. (Abụ Ọma 8:3, 4) Ọ bụrụ na anyị na-ekpe ekpere mgbe niile, na-akọrọ Chineke otú obi dị anyị, anyị na ya ga-adịkwu ná mma.—Gụọ Jems 4:8.
Mgbe anyị na-ekpe ekpere, Chineke achọghị ka anyị na-agwa ya okwu otú ga-eme ka a sị na anyị ma ekpere ekpe. Ọ chọghịkwa ka ihe anyị na-agwa ya bụrụ ihe anyị bu n’isi. Jehova agwaghị anyị na e nwere otú pụrụ iche anyị ga na-anọ ekpegara ya ekpere tupu ya anụ ya. Ma, ọ chọrọ ka ihe niile anyị na-agwa ya si anyị n’obi. (Matiu 6:7) Dị ka ihe atụ, n’Izrel oge ochie, e nwere otu nwaanyị aha ya bụ Hana. O kpere ekpere kọọrọ Chineke nsogbu o nwere n’ezinụlọ ha. Chineke mechara meere Hana ihe ọ rịọrọ ya. Obi tọrọ ya ezigbo ụtọ, ya ejiri obi ya niile kpee ekpere kelee Chineke.—Gụọ 1 Samuel 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.
Ihe ọma a Chineke meere anyị, nke bụ́ ịgwa anyị ka anyị na-ekpegara ya ekpere, enweghị atụ. Ihe ọ pụtara bụ na anyị nwere ike ịkọrọ ya ihe ndị na-enye anyị nsogbu n’obi. Anyị nwekwara ike ito ya na ikele ya maka ihe ndị ọ na-emere anyị. N’eziokwu, anyị ekwesịghị iji ihe ọma a Chineke meere anyị egwu egwu.—Gụọ Abụ Ọma 145:14-16.